Wasiirka Difaaca oo ku dhawaaqay in uu yahay Musharax u taagan xilka Guddoomiyaha Baarlamaanka - Caasimada Online
Home Warar Wasiirka Difaaca oo ku dhawaaqay in uu yahay Musharax u taagan xilka...
Muqdisho (Caasimadda Online) – Wasiirka Gaashaandhigga Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh C/Raxmaan ayaa maanta ku dhawaaqay in u musharrax u yahay xilka Guddoomiyaha Golaha shacabka Soomaaliya.
Shirka Jaraa’id ee uu kaga dhawaaqayay Musharraxnimadiisa ayuu ka sheegay in uu sii wadayo howsha Guddoonka golaha shacabka haddii uu ku guuleysto.
Waxaa uu amaanay Guddoomihii hore ee Golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo uu sheegay in uu meel wanaagsan gaarsiiyay Golaha shacabka isaguna uu halkaas ka sii wadayo.
Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Sheekh Aadan Madoobe) oo horey u soo noqday Guddoomiyaha Baarlamaanka ayaa asna shalay ku dhawaaqay inuu yahay Musharax u taagan xilka Guddoomiyaha Golaha Shacabka.
Maxamed Mursal waxaa lagu tuhmayaa in uu yahay Musharrax ay Xukuumadda wadato islamarkaana dooneyso in uu isagu beddelo guddoomiyihii xilkan iska casilay ee Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari.